Kandidà Rajoelina: « Mijoro aho hanavotra ny vahoaka sy ny firenena » | NewsMada
Kandidà Rajoelina: « Mijoro aho hanavotra ny vahoaka sy ny firenena »
Nihazo ny tany Amparafaravola, tany Fenoarivo Atsinanana, tany Soanierana Ivongo ary Ambatondrazaka indray ny kandidà Rajoelina, omaly. Nambarany tamin’izany ny fahavononany handray andraikitra eto amin’ny firenena.
Mazava ny hafatra. “Tsy nisafidy ny hahantra ny vahoaka malagasy fa nampahantrana koa hijoro hanavotra ny firenena aho ary hoentiko hampandrosoana an’i Madagasikara ny fitiavan-tanindrazana mikoriana ato anatiko”, hoy izy tamin’ireo toerana ireo. Nambarany fa hitondra fanantenana sy fahasoavana ny tenany fa ho amin’ny tsy fahantrana . “Fanamby ny antsika ka matokia ianareo fa ho lohany aty Afrika sy ny ranomasimbe Indianina isika ary ho anisan’ny firenena mandroso indrindra. Manana filoha tanora indrindra koa”, hoy ihany izy. Notsiahiviny fa sarobidy ny safidy ary hanamarika ny hoavy mandritra ny dimy taona izany. “Nijaly ny vahoaka tao anatin’ny dimy taona ka mila fiovana sy fandrosoana. Firenena mahantra indrindra maneran-tany isika ary vaky ny fo, latsaka ny ranomaso amin’izany. Adidy ny fandraisana andraikitra ary fahadisona lehibe eo amin’ny tantara ny tsy fanaovana izany ka nahatonga ahy hirotsaka. Hanova an’i Madagasikara sy ny fiainantsika isika amin’ny 7 novambra”, hoy ny kandidà laharana faha-13.
Tsy hamitaka ny vahoaka malagasy
Toy ny efa nataony tany amin’ny faritra hafa, nampanantena kianja manara-penitra ao Soanierana Ivongo ny tenany. Eo koa ny hametrahana sekoly EPP sy CEG ary lycée manaraka ny fenitra iraisam-pirenena, ahitana tranomboky, informatika. Hamboarina ny tsena. « Ny ambara rehetra, tanterahintsika avokoa. Fomba fanaovana politika vaovao izany. Tsy hamitaka ary tsy hamadika ny vahoaka aho”, hoy ny mpanorina ny IEM. Anisan’ny nofaritany ho laharam-pahamehana ny fametrahana fandriampahalemana maharitra, ny famoronana asa ho an’ny tanora, ny fampidinana ny vidin-jiro sy ny vidim-piainana ary ny hampiakarana ny fari-piainan’ny vahoaka. “Matokia fa tsy hamitaka ary tsy handainga aho. Mifanampy isika. Ampio aho ahafahako manampy anao…”, hoy ny kandidà Rajoelina.